Haaruun January 21, 2021
(London) 21 Jan 2021. Waxaa si aad ah loo hadal hayaa cadaadiska saaran tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard kaasoo xilli adag ku hoggaaminaya kooxdiisa, waxaana isa soo taraya wararka sheegaya in shaqadiisa ay miiska saaran tahay.
Waxaa jira macallimiin dhowr ah oo lala xiriirinayo kusiga Lampard inay baddelaan si ay majaraha ugu qabtaan Blues, waxaana macallimiintaas ku jira Thomas Tuchel, kaasoo lagu soo warramayo in haatan kooxda reer England wada xaajood la billawday si uu u noqdo macallinkooda xiga.
Tuchel ayaa laga ceyriyay shaqada kooxda Paris Saint-Germain bishii lasoo dhaafay, waxaana hadda uu u muuqdaa mid ka shaqo billaabi doona horyaalka Premier League.
Jan Åge Fjørtoft oo ah weeraryahan horay uga soo ciyaaray Premier Leagu isagoo ka tirsanaa Middlesbrough iyo Sheffield United ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in Chelsea iyo wakiillo ka socda macallinka reer Germany wada qaateen kulan ujeedkiisu yahay inay shaqada ka baddelaan Frank Lampard.
Macallin Lampard oo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda Chelsea ayaa waqti adag ku qaadanaya garoonka Stamford Bridge, waxaana calaamad su’aal ay saaran tahay mustaqbalka shaqadiisa, iyadoo booskiisa lala xiriirinayo Massimiliano Allegri, Ralph Hasenhuttl iyo Julian Nagelsmann.